Ukuba kunyanzelekile ukuba ujongane nenye indlela yokuhlala kulo mhlaba, akukho mathandabuzo. Ukuhamba kwethu kwihlabathi liphawulwe ngeempawu zomhlaba njengophawu njengoko zingabalulekanga ukuba sijonga ukulingana kwexesha lethu kunye nomhlaba. Ke ayibalulekanga kwaye inako ukutshintsha yonke into. Umhlaba uya kusinda kuthi kwaye siya kuba ...
ILangatye elingafiyo nguStephen Crane nguPaul Auster
IWild West, njenge-synecdoche yelizwe lasekhaya laseMelika ekubunjweni, yandise ukucinga kwayo, i-idiosyncrasy yayo kunye neefom zayo kwilizwe liphela elinobukrelekrele kunye neenkolelo malunga nayo yonke into. Ayisoze ikrokrelwe into enobuzaza ukuba iyakwenziwa kwilizwe elinje namhlanje ...
Ngaphandle koloyiko, nguRafael Santandreu
Uloyiko lwethu luye lwahlala lodwa, ngaphandle kwamathandabuzo. Ngokwenyani yonke into ihleliwe, elungileyo nembi. Kwaye indlela iluphu engapheliyo emva naphambili. Ngenxa yemvakalelo senza uvakalelo lwangaphakathi lomzimba. Kwaye ukusuka kolo luvo lungonwabisi esizivelelayo, kuloyiko, sinokufika ...
Iphepha1 Iphepha2 ... Iphepha18 Elandelayo →